Amboditsiry Tratra ireo mpanendaka mpambotry fiaraha-monina
Amboasary Atsimo Tsy mila OPJ, tsy mila Fitsarana ?
Manefa izay tratra ! Jiolahy efatra no maty omaly, sady tsy nandalo mpanao famotorana na OPJ (Officier de Police Judiciaire) no tsy niakatra Fitsarana. Tratra ambodiomby tamin’ny halatra samihafa ireo.
Fanafihana teny Anosipatrana Vehivavy vao tera-bao no tompon’antoka
Taorian'ilay fandrobàna ilay vola be, 36 tapitrisa Ar ana mpamatsy kisoa iray nitranga teny Anosipatrana, ny 05 aogositra teo dia olona telo no naiditra am-ponja vonjimaika rehefa avy niatrika ny fampanoavana .
Andapa Lehilahy iray tratra saika hanondrana rongony
Lehilahy iray nitondra rongony no saron’ny polisy teo amin’ny sakana Ambahinkarabo Andapa , Faritra SAVA ny 11 aogositra teo tokony ho tamin’ny 04 ora folakandro.
Fiarovana ny marefo Nataon’ilay Polisy vavy tsy nahahetsika ilay mpanendaka
Ramatoa iray nitondra finday no lasibatry ny mpanendaka tao akaikin'ny Sacré Coeur Beryl Rose Toamasina omaly.
Ambararata Soavinandriana Telo mianaka novelesin’ny jiolahy tamin’ny kobay
asan-jiolahy tao Ambararata Soavinandriana Itasy ny alin'ny 11 jolay lasa teo.
Faritra Itasy Hametraka paikady iadiana amin` ny halatr’omby
Miverina manjaka ny halatra omby eto Madagasikara ary maro dia maro ny fitarainana momba izany.
Boriborintany faha 4 Manafika tranona mpitandro filaminana ny tontakely
Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango ny mponin’ny boriborintany faha 4, hoy ny solombavambahoaka ao an-toerana, Emilien Ramboasalama, satria fokontany miisa 6 izao tao anatin’ny tapa-bolana no nandalovan’ny mpamaky trano sy mpamono olona. Sahy manafika tranona mpitandro filaminana ireo tontakely.
Mpianatra iray hamonjy fodiana no nendahina mpanendaka miisa 03 teny Amboditsiry ka lasa tamin'izany ny finday niaraka tamin’ny valizy izay nisy antontan-taratasy maro mahakasika ny fianarany sy vatsy izay nomen’ny Ray aman-dreniny azy.
Tsy nisalasala ity mpianatra ity nanatona ny kaomisarian' ny boriborintany fahavalo ka nandray andraikitra avy hatrany ny polisy nanokatra fanadihadiana. 2 andro taorian'ny fanendahana dia voajonon'ny polisy teny bemasoandro Itaosy ny lehilahy miisa 05 izay fantatra fa mpandray ireo entana halatra . Ny ampitson'io indray dia tra-tehaka ihany koa ireo lehilahy miisa 02 antsoina hoe Tex sy Mahagaga izay nanao ny asa fanendahana raha tafaporitsaka kosa ny jiolahy iray niaraka tamin'izy ireo. Tsy afaka nankaiza ity jiolahy iray ity fa dia tratran'ny polisy ihany koa iray andro taorian'ny nahazoana an'i Tex sy Mahagaga. I Mahagaga moa dia efa fantatra tamin’ny raharaha fanafihana sinoa teny Amboditsiry roa taona lasa izay. Efa tafaverina amin'ny tompony avokoa moa ireo entana lasan'ireto mpanendaka ireto.